Nyanzvi Inotakurika mwenje dhiziri jenareta seti Mugadziri uye Fekitiri Zvakananga | Wako Akafanana
MUENZANISO EP-LT5SE / 4 EP-LT10SE / 7 EP-LT10SE / 9
Kunonyanyisa kureba kwemast m 4.5 7.2 9
Kukwidza Magetsi Nemaoko Magetsi
Kutendeuka kona Degree 340 180 340
Kushanda kumanikidza Psi (Max) 28 N / A. 35
Vertical Musoro mutoro makirogiramu (Max) 40 60 80
yakazara simba remarambi w 4x400 4x400 / 4x1000 4x1000
Chiedza chemwenje Lumen / mwenje 36000 36000-85000 85000
Hupenyu hwese hwemwenje Maawa 5000
Kushanda tembiricha ℃ 85
Kubatanidza kuchengetedza index IP54
Chiedza kufukidza Acres 5to7
Kuvhenekesa Tower Dielse jenareta Setira karavhani, simudza mast, magetsi, michina yekuvhenekesa, musanganiswa weiyo system, tirera inogona kuve yakaparadzana ingangoshandisa mutumbi wemotokari uri kudhonzwa, zvakare inogona kushandisa zviripo uye ese marudzi ese eakisi yakashongedzwa nekusimudza mast uye kuvhenekera uye mimwe michina inonzwisisika kuisirwa pane tirera, uye vozoita seti yakazara yeinotakurika mwenje system. Nhare dzekufambisa dzinogona kuendeswa nyore nyore kunzvimbo dzinogona kuvhurwa traffic uye mwenje muhombe unodiwa kwenguva pfupi. Zviri nyore kushandisa.
EP-LT yekuvhenekera shongwe nhepfenyuro inowirirana inotakurika mwenje shongwe ine 4x400W kana 4 * 1000W simbi halide mafashama emagetsi uye inobviswa isina mutsindo dhiziri jenareta 5KW / 10kw. Yakanakira diki uye yepakati nzvimbo nzvimbo dzekushanda, EP-LT mwenje yekuvhenekesa iri nyore kwazvo kuti ibatwe neanoshanda chete.
Shanda zvirinyore: Nebhatani rakapatsanuka bhatani kudzora pa / kudzima kwemarambi maviri uye zviri nyore kugadzirisa kukwirira kwechidzitiro pamurume; mwenje unosanganisira zvikamu zviviri zvikuru: muridzi wemwenje (kusanganisira rambi remwenje uye mast) uye jenareta anomira (kusanganisira jenareta, kesi yemagetsi uye jenareta base). Zviri nyore kuti vaungane, nokukatanura uye senga. Shanda zviri nyore uye zvine kugona kwazvo kushanda.
Yakaparadzaniswa Kuvavha: Chikamu chimwe nechimwe cheshongwe yekuvhenekesa chakanyatsoiswa mumapepa kudzivirira chero kukanganisa kunogona kuitika.
Tora akawanda anovhunduka echimiro dhizaini, yakanakisa yekurwisa-kuvhunduka kuita uye inogona kushandisa zvakavimbika munzvimbo yepamusoro yekuvhunduka;
Tora zvakatipoteredza mwenje chiwanikwa chiwanikwa uye yepamusorosoro spraying tekinoroji, isina mvura, isina guruva, antirust uye yakakodzera kushanda kunze kwenzvimbo kwenguva yakareba;
Yakakwana yemagetsi kuenderana uye haigone kukonzera kukanganisa kwehutachiona hwekutapurirana;
Iyo yose mwenje inotora yakatumirwa yepamusoro simbi zvinhu, mhando yepamusoro uye yakavimbika uye inoshanda mushe munzvimbo yakaoma.
Tsika-yekushongedza sevhisi: Kuti tikwanise kusangana yakasarudzika inodikanwa yevakasiyana vatengi, isu tinoda kumisikidza dzakasiyana rambi mhando, simba, mwenje kuwanda, mast kukwirira uye jenareta maererano nevatengi vatengi pachedu chikumbiro.
Makuriro ekushandisa: nzvimbo hombe, kupenya kwakapenya mwenje, yakakosha yekudhonza uye yekufambisa chishandiso inogona kukurumidza kuendeswa, ichipa ruyamuro rwehusiku, emergency, kuvhenekesa saiti uye simba rekukurumidzira
Pashure: 5kw yakavhurika / yakanyarara mweya wakatonhora dhiziri jenareta seti
Zvadaro: China pombi yemvura